Madaxweyne Farmaajo oo xayiraad saaray kharashaadka ka baxa Bankiga dhexe ee Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaajo oo xayiraad saaray kharashaadka ka baxa Bankiga dhexe ee Soomaaliya
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa maanta soo saaray amar culus oo lagu xanibaayo kharashaadka dowladda ee laga bixiyo Bankiga dhexe ee Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa wasaaradda maaliyadda iyo mas’uulyiinta sare ee Bankiga dhexe Soomaaliya ku amray laga bilaabo maanta oo ay bishu tahay 12-ka Febraayo 2017-ka, inaan Bankiga wax lacag ah laga bixin karin illaa amar dambe.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa xilliyadii ugu dambeysay oo ay socdeen doorashada amar noocaan oo kale hore usoo saaray.
Uljeedka uu madaxweyne Farmaajo maanta usoo saaray amarkaan ayaa ah mid uu kaga hortagaayo musuq-maasuq ka dhaca kharashaadka dowladda Soomaaliya inta lagu gudo jiro, xilliga kala guurka ah iyo kala wareega xilka dowladda cusub ee Soomaaliya.
Sanadkii hore ee 2016-ka ayaa la sheegayaa inay jireen lacago gaaraya malaayiin doollar ah oo lagala baxay qasnadda Bankiga dhexe, iyadoona mas’uuliyiin ka tirsanaa dowladda Soomaaliya oo xilligaasi ku jiray ololaha doorashada lagu soo eedeeyay inay lacago badan kala baxeen Bankiga, iyagoo awoodooda dowladnimo isticmaalaya.
Si kastaba ha ahaatee, tallaabadaan uu ku dhaqaaqay madaxweyne Farmaajo ayaa noqoneysa tii u horeeysay uu ku dhaqaaqo illaalinta hantida qaranka Soomaaliya, iyadoona markii la dhaariyay madaxweyne Farmaajo uu balan ku qaaday inuu la dagaalami doono musuq-maasuqa, islamarkaana illaalin doonno ammaanadda iyo hantidda qaranka Soomaaliyeed.